5-Ku guulayso wax walba.
8-Rajadaada iyo baryadaada.
Ma jiro qof buuxin kara booskaaga, sidoo kale ma jiro qof dhan walba kaa shabihi kara taas macnaheedana waxaan ula jeedaa jacaylka iyo wanaaga aad nagu beerato haddii aad meesha ka baxdid ma jirto si aan u meeleyn karno ama u buuxsan karno.
Inta badan ay nimcadaadu badato, niyad wanaagaagana ha bato, nimcadu waa niyad wanaag, niyad wanaaguna waa Nimco.
Duruufahaaga dhaqaale oo xumaada yeysan hboos u dhigin ku deeqiddaada badan.
Xusuusnow in wax bixintu ay kuu dhawayso deeqtoonaanta.
12-Is noqo adiga
Marka aad ku shaqaynayso Caqliga iyo fakarka qof kale taas macnaheed waa in aadan nafsad ahaan is ahayn, waana hubaal inta aad xaaladdaas ku jirto in aadan noqon karin qofka aad tahay naftaadana wax u qaban karin.
Doodaada iyo aragtidaadana waxay ku qotontaa u adeegidda aragtida qofka maskaxdiisa ku saaray isaga ayaad adeege aan is ogayn u tahay.
Naftaada haddii aad rabto in aad wax u noqoto ama wax u qabato waa in aad ku shaqaysaa caqligaada iyo fakarkaaga, markaas ayaad noqon kartaa qofka aad rabtid.